16 Astaamood Oo Uu Leeyahay Maamulaha Wanaagsan Ee Ganacsiga Ku Guulaysta - Daryeel Magazine
16 Astaamood Oo Uu Leeyahay Maamulaha Wanaagsan Ee Ganacsiga Ku Guulaysta
75% Ganacsiyada yar-yar ee cusub waa ay guul daraystaan. Waxa si cad loo tilmaamaa in 25% ka guulaysta ay sabab u tahaya sifooyinka madaxa ama Hogaamiyaha ganacsiga.
Waxa aan halkan kugoo bandhigi doonaa sifooyin madaxda ganacsiyada guulaystay ay ka wada siman yihiin. Sifooyinkan ma ahan kuwo dhamaystiran laakiin waa kuwa ugu caansan. Waxana kamid ah kuwan.
1. KU FIICAN “ SHAQAALAYNTA IYO SHAQO KA CAYRINTA SHAQAALAHA”.
Waa hogaamiye yaqaan sida loo xusho shaqaalaha faa’ido u keeni kara ganacsiga. Kuma xusho shaqaalaha aqoon shaqsiyeed, eex, qaraabo-kiil, nin-jeclaysi iyo dano ka baxsan ganacsiga. Waxa uu eegaa shaqsi u qalma baahida shaqo ee jirta , kana soo bixi kara si hufan. Sidoo kale, waxa uu shaqada ka cayriyaa shaqaala liita, aqoonta yar, aan shaqadooda kasoo bixin, qaladaad xad-dhaaf ah sameeyo. Kama baqo in uu cayriyo qof aan shaqadiisa kasoo bixi karin ama aan faa’ido u keenayn ganacsiga.
2. WAXA UU DHISAA DHAQAN. Hogaamiya fiican ma dhiso ganacsiga oo kaliya laakiin waxa sidoo kale uu dhisaa dhaqan hufan oo ku dayasho mudan ama wado u noqda dadka ka hooseeya. Waxa uu dhisaa dhaqan nadiif ah. Dhaqan ku salaysan daacadnimo, karti, hufnaan, eex la’aan, run sheeg,wada shaqayn, hami, iyo hiigsi fog.
3. DHAGAYSTA OO FICIL SAMEEYA. Hogaamiya wanaagsani waxa uu si daacad ah u dhagaystaa shaqaalihiisa dhamaan wixii talo ama dhaliil ah kadibna waxa uu ku camal falaa talooyinkaa iyo dhaliila haas. Bini’aadam ku ma dhamaystirna, sidaa darteed Hogaamiyaha wanaagsani waxa uu og yahay waxku oolka talooyin iyo dhagaysiga shaqaalaha.
4. HAL ADAG / AAN SI SAHLAN U QUUSAN. Hawl kasta ee bilow ahi waxa ay martaa sadex heer oo kala ah 1- bilow hore oo qarash un la galiyo ganacsiga 2- Dhaqan gal: oo ah marka ugu horaysa ee ganacsigu hawl galo laakiin weli macaamil iyo suuq fiican uusan yeelan ama aan si wanaagsan loo baran taa oo dhalisa inta badan qasaare hore. 3- faa’dio iyo Guul: Marka ganacsigu sal dhigto, yeesho macaamil balaaran oo daqli fiican iyo faa’ido dhalo. Ogow ganacsiyada badani waxa ay burburaan Heerka 2aad oo ah hawl galka hore, sidaa darteed hogaan ka wanaagsani waxa uu u dhabar adaygaa qasaare iyo wareer kasta ee ka dhasha inta ganacsigu si fiican uu sal dhiganayo.
5. ARAGTI LEH: Ganagsi kasta waxa uu ku dhisan yahay aragti baahi dadweyne. Hadii aysan jirin baahi dadweyne, ma jirayo ganacsigaas. Adeeg ama Badeeco, ganacsigaagu waa in uu leeyahay aragti dheer ee baahi dad.
6. HAWSHA KU DHEGA. Marka ay jirto shaqo ama hawl markaa taagan, waa uu ku dhegaa ilaa laga dhameeyo hawshaas. Marna kama war-wareego si kasto hawshaas u dhim iyo haraad badan tahay. Sidoo kale waxa uu jaheeyaa kooxda qabanaysaa hawshaas ilaa ay ka dhameeyaan sida ugu hufan oo ugu dhaqso badan. Waxa uu waqtigiisa iyo awoodiisa galiyaa si loo dhamaystiro hawshaas taagan.
7. SI CAD U HADLA. Dadku waa ku kala fiican yahay hadal ka, laakiin hogaamiya wanaagsan waxaa sife cad u ah in uu si cad u hadlo marka uu ka hadlayo shirkada , badeeco ama adeega la qabanayo, ujeedada ganacsiga, aragtida dheer , siyaasada la raacayo isagoo weliba adeegsada waxyaabo dad ku aad aad u xusuustaan.
8. U HAGAR BAXA OO U DOODAA MACAAMIISHA. Ganacsi kasta waxa uu ku dhismaa helida macaamiil jecel adeega iyo badeecada ganacsiga. Hadii tayada adeega macaamiishu hoos u dhaco ama badeecadu xumaato waxa luma macaamiisha. Hogaamiya wanaagsan waxa uu mar kasta u doodaa macaamilka gadanaya badeecada ama adeega shirkada. Waxa uu u hagar baxaa si macaamiishu u hesho adeega ama badeecada ugu wanaagsan suuqa dhan kasta. Waxa uu naftiisa kasoo qaadaa macaamiil ka. waxa uu raadiyaa ciladda ama tayo xumada adeega ama badeeca shirkadiisa. Waxa uu ku fakaraa sababta ama faa’idada qofka gadanaya adeega ama badeecada uu ka heli karo shirkadiisa.
9. KU WANAAGSAN QANCINTA DAD KA. Qof ka shirkad madax u ahi waxa uu la macaamilaa dad dano kala duwan leh. Sida macaamiisha oo raba waxa milkiilayaashu aysan raali ka ahayn. Qaybaha kala duwan ee shikada oo kooxba fikrad duwan la imaan karto, iwm. Hogaamiyaha wanaagsan waxa uu isku duba ridaa ujeedada iyo fikirka dhamaan dad ka uu la macaamilayo. Waxa uu ka gadaa aragti dheer ee dhirkada oo uu ku qanciyaa koox kasta. Waxa uu isku hal meel u jiheeyaa shaqaalaha shirkada oo dhan.
xigasho: Mark Suster.
10. si faahfaahsan u shaqeeya. Hogaamiyahu waxa uu kormeeraa adeega ama badeecada bilow ilaa dhamaad. Dhanka garash galinta, soo saarka, qaybinta , suuq gaynta iyo macaamilka intaba, Hogaamiyaha wanaagsan waxa uu u eegaa si faahfaahsan dhamaan marxaladaha kala duwan ee ganacsiga si uusan u soo galin mugdi.
11. Xirfad u leh la qabsiga isbadal ka. Hogaamiyaha ugu wanaagsan ee ganacsi waxa uu awood u leeyahay in uu la qabsado ama la jaan-qaado badeecada iyo adeega ganacsi ee si lama filaan ah isbadal ugu yeesha suuqa iyo dalabka macaamiisha. Aan noqon barti yaqaan, ee la socda awoodaha suuqa iyo isbadal ka.
12. U Samayn Kara Go’aan Si Dhaqsa Ah. Ganacsiga yar-yar waxa uu inta badan u baahan yahay go’aano dhaqso xaaladaha isbadal ka suuqa. Hogaamiyaha wanaagsan waa kan sameeya Go’aano dhaqso ah oo sax ah.
13. Loolanka wayn sameeya. Hogaamiya wanaagsan waxa uu ku loolamaa suuqa sida kasbashada macaamiisha, helida shaqaalaha ugu fiican, ku tar-tamida heshiisyo waaweyn iyadoo suuqu uu yeelan karo loolan xoogan.
14. Geesi ah oo karti leh. Hogaamiyaasha ugu wanaagsan waa kuwa leh geesinimo ay ku bilaabaan ganacsi, ugu adkaystaan inta uu kacayo ganacsigaas, laakiin hadana kasoo dhexbaxa dhib kasto oo la yimaada karti dheeri ah. Mar-marka qaarkood sameeya gao’aano aad shaqaaluhu raacsnayn.
xigasho: Tolis Dimopoulos.
15. Marna Aan Ka Joogsan Fulinta Aragti Dooda. Hogaamiyaha wanaagsan waxa uu u joogta ah u kormeeraa in la fuliyo aragtida shirkada. Waxa uu saamayn ku yeeshaa in shaqaaluhu ay u fuliyaan hawshooda si waafaqsan aragtida shirkada. Waxa uu hubiyaa in hiigsiga shirkadu u jeedo halka uu doonayo.
16. DEEQSI AH. Dadku waxa inta badan ay jecel yihiin in ay la shaqeeyaan hogaamiye deegsi ah dhanka la macaamilka shaqaalaha, Macaamiisha, shirkadaha la hawl-gala, iwm.
Hadii aad tahay hogaamiye shirkad ganacsi oo cusub , xusuuso oo ku dhaqan talooyin kan. Waxa aan hubaa badan kood in ay ku caawin doonaa hadii aad raacdo.
Sidee Loo Noqdaa Arday Wanaagsan Oo Guulaysta? 10 Astaamood Oo Muujinaya Inaad Diyaar U Tahay Ganacsi QURUXDA QOYSKA: Astaamaha Waalidka Wanaagsan Faaidada Kalluunku U Leeyahay Caruurta Yaryar